Umlando wenkosi uMpande – iAfrika
Sike sabhunga ngendaba yenkosi uSenzangakhona kanye noDingane, kulesi siqephu-ke sisika kwelijikayo ngenkosi uMpande. Inkosi uMpande wathatha umbuso kwaZulu ngemuva kokukhothama kukaDingane njengoba phela uDingane wayekhothame enganabo abantwana ababengaba izindlalifa uma esedlule emhlabeni. Ngemuva kwempi yaseNcome eyaliwa uZulu namabhunu, uDingane wathumela umlayeza kuMpande ukuthi amnike amabutho njengobaya amaningi awakhe ayesale eNcome. uMpande wenqaba-ke wenqaba namabutho akhe, lokho okwamnenga kakhulu uDingane kwamenza ukuthi aqhamuke nesu lokumsoconga umfowabo.
Isu lenkosi uDingane lokuzama ukusoconga uMpande
Kuzokhumbuleka ukuthi nakuba uMpande athatha ubukhosi, wayesinde emlonyeni wengwenya, elalelwe unyendle wuDingane owayefuna ukumsoconga. uMpande waphunyula ogibeni lukaDingane esizwa wukulunywa indlebe nguNdlela kaSompisi owawuhlaba wawulawula ngokuhlebela uMpande ngozungu olwase lwakhiwe ngowozalo lwakubo, uDingane. Ekuzweni ukuthi uDingane wayefuna ukumenzakalisa, uMpande wabe esebaleka waya kokwakha umuzi wakhe iKwaMahambehlala khona eduze komfula uThongathi.
Isu likaDingane kwakuwukuthi uzopha uMpande izinkomo, okuzothi uma uMpande esezozibonga, bese uDingane eyamsoconga. Kepha-ke akwenzekanga ngokufisa kukaDingane njengoba phela uNdlela kaSompisi owayehambise lezo zinkomo ezaziyisipho-mbumbulu kuMpande, wafike wamhlebela ukuthi angayi ukuyozibonga lezo zinkomo njengoba uDingane wayehlose ukumenza isilo sengubo.
uMpande uhlangana namaBhunu
Ekubalekeni kwakhe uMpande wasuka nabalandeli bakhe baqonda oThukela. Ngenxa yokuthi wayehamba ngokubaleka, futhi ehamba ngendlela enqamulelayo ezweni ayengalazi kahle, uMpande wayehamba ebuza indlela. Kwakuthi uma sebekhathazwe yindlela uMpande nabantu bakhe babuye bathathe ikhefu badle ukuze bezoqhubeka nohambo lwabo. uMpande wabaleka waze wayofika esizweni samaBhunu. Ethuka agelekeqeka amaBhunu ebona uMpande, phela ayengazi noma wayebalekela inkosi uDingane noma kwakukhona ubuqili ayefuna ukubenza kuwo.
Ekubhungeni kukaMpande namaBhunu wawatshela ukuthi wayebalekela inkosi uDingane owayefuna ukumyisa kwagonqanyawo. AmaBhunu agcina ebonile ukuthi cha impela uMpande wayengezile ngokubi kuwona njengoba nje wavuma futhi nokuwabuyisela izinkomo zawo ezazidliwe wuDingane. Lokho kuhlangana kukaMpande namaBhunu kwabenza baba yimbumba yezitha kuDingane. Yingakho nje kwathi lapho impi kaDingane namaBhunu idibana okwesibili, yabe isiholwa nguMpande engasohlangothini lwamaBhunu, lapho uMpande abhekana khona ngqo ngeziqu zamehlo noDingane. Kuyo-ke leyo mpi yaseMaqongqo yilapho okwasala khona iqhawe uDingane njengoba kunezibongo zenkosi uMpande ezithi:
“Wamudl’ uNozishada ezalwa uMaqhoboza”
Kuhle-ke sikubalule ukuthi uDingane wawuthola umoya wokuthi uMpande uza nempi futhi usehlangene namaBhunu, okwenza abe esethumela izinhloli ukuba ziyotshela uMpande nawo amaBhunu lawo ukuthi amaBhunu wayezowanxephezela ngezinkomo lezo ayekade egweve nazo, kepha lokho akwenzekanga ngohlelo lukaDingane, lezo zinhloli azibuyanga zasocongwa ngamaBhunu ehlangene noMpande.
Inkosi uMpande uhlasela eSwazini
Okunye okukhunjulwa ngenkosi uMpande wukuthi wake wahlasela naseSwazini. AmaSwazi acasha nezinkomo zawo waze uMpande kwangathi uyaphenduka ubuyela kwelakwaZulu. Ngesikhathi amaSwazi esecabanga ukuthi ukuhlasela kukaMpande sekuphelile, kwakuyilapho uMpande aphenduka khona wathumela ibutho lakhe ukuthi liphindele emuva eSwazini liyolanda izinkomo lezi amaSwazi ayekade ezicashise emgedeni. Nebala leli butho likaMpande lafica amaSwazi esezikhiphile izinkomo lapho ayekade ezifihle khona, afike azithatha lezo zinkomo abuyela nazo kwelakwaZulu.
Impi kaMbuyazwe noCetshwayo
Ziningi-ke izigigaba ezenzeka ngaphansi kombuso wenkosi uMpande okuyinto okwase kuyinsakavukela umchilo wesidwaba leyo yezigameko ngaphansi kwamakhosi akwaZulu. Njengoba sithola nje nokuthi inkosi uMpande yiyona eyaqhatha amadodana ayo okungo Mbuyazwe noCetshwayo, njengoba wayeseguqula umcabango engasafuni indlalifa yakhe uCetshwayo ibe yinkosi yakwaZulu, nokho-ke leyo sizoyizeka uma sesiloba ngomlando wayo inkosi uCetshwayo engosini elandelayo.
Inkosi uMpande njengenjwayelo naye wayenamakhosikazi amaningi ngoba phela amakhosi akwaZulu ayeganwa kakhulu enesithembu. Sithi-ke ake sisike udlubu ekhasini sinithulele amakhosikazi ayo inkosi uMpande noma kukhona esingenalo kahle ulwazi lwawo.
Kwakukhona uNgqumbazi kaTshana owayeyinkosikazi enkulu kaMpande okubikwa ukuthi walotsholwa ngezinkomo zeLemb’ eleq’ amany’ amalembe (uShaka/uSigidi). uNgqumbazi nguyena okwakumele azale indlalifa, wazala uCetshwayo.
uMonase Nxumalo yena wayekade engundlunkulu kaShaka owabe esemupha yena uMpande. Okuzwakala ukuthi wathi lapho uMonase esegana uMpande, wabe ezethwele ingane kaShaka. Wafika kuMpande wabeletha uMbuyazwe abaningi abathi impela kwakuyindodana yenkosi uShaka. Abanye abantwana bakhe kwaba uMantantashiya, uMkhungo kanye nentombazane uBathonyile.
Enye inkosikazi kaMpande kwakunguNomatshali owayezalwa wuSiguyana okuthiwa yena ke wayengasuki ematheni, eyintandokazi kaMpande. uNomatshali-ke yena wazala izingane okungoMthonga, uMgidlana kanye noPoyiyana.
Amanye amadodana kaMpande kubalwa phakathi kwawo uZiwedu, uHhamu kanye noSomaklwana. Bona-ke bazalwa ngamanye amakhosikazi enkosi uMpande kepha wona esingenalo kahle ulwazi ngawo.
AbaseMbo Buthelezi Clan names Gumede Gwala Izibongo Langa Madlala Magwaza Malinga Manqele Masuku Mbatha Mkhize Nene Ntombela Ntuli Nzama Nzuza Qwabe Shembe Ukufihla Zondi Zulu Zungu